Nanaiky tsy fidiny ny tale jeneralin’ny OMACI (Ofisy Malagasy misahana ny sarimihetsika), Ramitandrinarivo Bon-Temps namindra andraikitra tamin’ny tale jeneralin’ny kolontsaina, Razafiarison Francis Alexandre. Nanano-sarotra ny famindram-pahefana satria nilaza ny tale jeneralin’ny OMACI fa mbola tsy vonona ny antontan-taratasiny, ny hevitra anefa efa tapaka fa ny 7 mey 2019 no atao ny famindram-pahefana. Efa nivonona nitondra mpitandro filaminana ny avy amin’ny ministera tamin’io fotoana io. « Famindrana lakile no tena natao teo (…) Famindram-pahefana « par défaut » no natao na nanaiky izy na tsy nanaiky satria tsy maintsy ny baiko », hoy ny tale misahana raharaham-pitsarana eo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina, Rakotondratafika Henintsoa eo anivon’ny minisitera. Nilaza kosa ny tale jeneralin’ny OMACI teo aloha fa tokony mbola hiandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC) izay vao hirosoana ny famindram-pahefana. « Gaga ihany koa aho fa efa rava ny OMACI kanefa mbola misy famindram-pahefana ihany », hoy izy nanazava ny antony tsy fahavononany. Araka ny fanazavan’ny tale misahana raharaham-pitsarana hatrany dia tapaka tao anatin’ny filankevitry ny minisitra ny 17 aprily 2019 ny didy hitsivolana manatsahatra ny lalàna mifehy ny politikan’ny sarimihetsika sy ny sary miaina izay nanangana ny OMACI. Noho izany, rava ity rafitra ity. Tsy ny sarimihetsika malagasy akory no rava fa ny rafitra. Miverina eny anivon’ny minisitera fitantanana ny sarimihetsika ka ny tale jeneralin’ny kolontsaina no hisahana izany vonjimaika mandra-pahatonga ny lalàna vaovao, hoy izy. Nampatsiahy ihany koa izy fa efa tamin’ny 18 aprily 2019 no nandray ny naoty manome ny baiko hamindrana ny fahefana ny tale jeneralin’ny OMACI. Nandeha nitory ny raharaha teny amin’ny filankevi-panjakana ity tale jeneraly ity. Rehefa natao ny asa famotorana, nihainoana ny andaniny sy ny ankilany dia namoaka didy ny fitsarana tamin’ny zoma 3 mey 2019 teo fa ara-dalàna ny hanaovana ny famindram-pahefana. Tsy resaka lalàna mifehy ny fananganana ny antokon-draharaham-panjakana ihany no naha be resaka tamin’ity OMACI ity fa resa-bola ihany koa. Ny andaniny milaza fa misy tsy fahatomombanana ny fitantanana. Ny ankilany nampahafantatra fa efa maro ireo famatsiam-bola azon’ity rafitra ity. Sao dia politika hafa mihitsy no tiana atao ? Lynda A. Cet article FAMINDRANA LAKILE TEO AMIN’NY OMACI: Nitondràna mpitandro filaminana est apparu en premier sur déliremadagascar.
FAHATAPAHAN-JIRO SY RANO :: Lasibatry ny toetr’andro sy fahasimban-javatra maro ny Jirama
Mikaikaika ny mpanjifa. Tato anatin’ny andro maromaro izao dia betsaka ireo toerana tsy nahazo herinaratra teto Antananarivo. Tapaka adiny telo isan’andro ny jiro. Olana maro no mahatonga izany ka nitondra fanazavana amin’ny fahatapahana jiro sy rano eto Antananarivo sy ny mano- didina ny avy eo anivon’ ny orinasa Jirama. «Manampy trotraka ny olana teknika sy ny fahanteran’ny fotodrafitrasa mitsinjara ny herinaratra, ny toetry ny andro, ny orana sy rivotra mahery izay niainantsika, tato ho ato. Nahatonga ny fianjerana andrin-jiro maromaro sy fahatapahana tariby ka nampikorontana ny fitsinjarana ny herinaratra izany», hoy ny fanazavana. Misy fiantraikany amin’ny famatsiana rano ihany koa ny tsy faha-tomombanan’ny herinaratra satria mila angovo ny fampiakarana ny rano amin’ireo siniben-drano maro eto Antananarivo. «Mahatsapa tanteraka ny fahasorenan’ny mpanjifa noho ny fikorontanana aterak’izany izahay. Efa eo am-panarenana tanteraka ny simba ny orinasa Jirama amin’izao fotoana izao. Inoana ny fiverenan’ ny herinaratra amin’ny laoniny amin’ny faran’ity herinandro ity (Ndrl : omaly)», raha ny nambaran’ny tale jeneralin’ny orinasa Jirama Jaomiary Olivier. Mbola mitohy kosa ny asa fanarenana ny fitaovana lehibe roa na «transformateurs» ao Ambodivona. Tokony ho vita, omaly hariva, ny iray ary afaka hamerina ny famatsiana ny herinaratra amin’ny laoniny ny ao Ambodivona, raha ny fanomezan-toky nataon’ny tale jeneralin’ ny Jirama. Nametraka laharana hiantsoana mivantana azy ireo ny Jirama dia ny 3547-033547-0323203547 raha misy trangana fahatapahana na olana hafa mba hahafahan’ izy ireo manarina haingana ny fahavoazana. L’article FAHATAPAHAN-JIRO SY RANO :: Lasibatry ny toetr’andro sy fahasimban-javatra maro ny Jirama est apparu en premier sur AoRaha.
Festival SAR’nao: etsy amin’ny AFT i Samuel Aranda
Mitohy ao amin’ny Alliance Française Antananarivo (Aft) Andavamamba ny hetsika tafiditra ao anatin’ny Festival SAR’nao. Manomboka anio, i Samuel Aranda sy ireo saripika nalainy no hiranty eny an-toerana hatramin’ny 22 novambra izao. Nosalorany ny lohateny « « Emptiness » Barcelona Spain », ity fampirantiana ity. Marihina fa lohahevitra finidin’ny tompon’andraikitry ny Festival SAR’nao amin’ity taona ity ny « Images innées, covid-19 ». Iray amin’ireo mpiasa « pigiste » eo anivon’ny New York Times sy El Magazine i Samuel Aranga. Fifaninanana sy fampirantiana saripika maro no efa notontosainy maneran-tany. Nisy tamin’ireny ny nahazoany loka. Anisan’izany ny nandrombahany ny « Prix national espagnol de la photographie » nokarakarain’ny Anigp-Tv. Fanehoana an-tsary ny fifindra-monina avy aty Afrika mankany Eoropa no nasehony tamin’io taona 2006 io.Fantatra fa mbola hisy toerana hafa ihany koa handray ny Festival SAR’nao, amin’ity taona ity. Misy rahateo ny fiaraha-miasa eo amin’ny mpikarakara sy ny « Collectif dres reporters d’images de Madagascar » na ny « Crimad ».HaRy Razafindrakoto L’article Festival SAR’nao: etsy amin’ny AFT i Samuel Aranda a été récupéré chez Newsmada.
Fakiolte Degmia Barikadimy: nisokatra ny lalam-piofanana fitantanana seranan-tsambo
Sehatra iray tena ilain’ny sampandraharaham-panjakana sy ny orinasa tsy miankina ny fisian’ny lalam-piofanana ambony mikasika ny fitantanana ny seranan-tsambo any Toamasina.Hisokatra tsy ho ela ao amin’ny departemanta Degmia, oniversite Bari­ka­dimy Toamasina, ny sampam-piofanana vaovao, mikasika ny fi­tantanana ny seranan-tsambo sy ny fampitaovana (formation por­tuaire et logistique). Tan­te­raka izany vokatry ny ezaky ny sojaben’ny Degmia Barikadimy, ny Pr. Razanakolona Diny. Afa­ka mifaninana miditra ao ny mpi­anatra manana mari-pahaizana roa taona aorian’ny bakalorea (back +2). Mandritra ny roa taona ny fiofanana, ahazoana ny “licence” amin’izao andiany voalohany izao, ary hitohy ho an’ny “Masters 2” atsy aoriana. Voalohany eto Madagasika­ra ity sampam-piofanana ity fa niofana tany ivelany hatrany ny Malagasy hatramin’izay. Miahy azy ny tale jeneralin’ny Orinasa mikarakara ny entam-barotra (SMMC), i Tsirenge Niriko Ro­salien, sady filohan’ny filankevi-pitantanan’ity sampam-piofanana ity. Mitsinjara efatra ny loham-piofanana hita ao aminy, ny varotra iraisam-pirenena, ny fi­tantanana samihafa mikasika ny seranan-tsambo, toy ny fampitaovana, ny maha olona, ny fanaraha-maso ny entam-barotra, sns. Nilaza ny sojaben’ny Deg­mia, oniversite Toamasina, fa an­koatra ny fiaraha-miasa amin’ny SMMC, hiitatra any amin’ireo orinasa ao amin’ny seranan-tsambo Toamasina ny fiaraha-mi­asa, toy ny Spat, ny MICTSL, ny APMF, sy ny maro hafa. No­ma­rihiny fa tsy maintsy hatsangana ny laboratoara mialoha ny hanokafana ny sampam-pianarana ahazoana ny “masters 2”.Sajo sy Njaka A.L’article Fakiolte Degmia Barikadimy: nisokatra ny lalam-piofanana fitantanana seranan-tsambo a été récupéré chez Newsmada.